TUSOOYOOYINKA: 21 COOL DIY CINWAANKA DIYEYNTAADA - DIIWAANGELINTA TELEFOONKA
ACCUEIL » VIDEOS WAXYAABAHA: 21 DIY DIYAARIYADEEDKA KU SAABSAN GURIGAADA
TUSOOYOOYINKA: 21 DIYAARIYADA DIYAARIYADA DIYAARIYADEEDKAAGA
KA HELI KARTA DIIWAANKA TELEFOONKA TELEFOONKA
Soo ogow kiisaska taleefanka ee aad si sahlan ugu sameyn karto guriga. Waxay u muuqdaan kuwo aad u jilicsan in saaxiibadaadu ay maskaxdeenna ay xitaa ku weydiin karaan inaad sameyso kiis telefoon.
Aan ku bilowno kiis telefoon oo kaa yaraynaya walbahaarka, ka caawinta inaad ku nasto shaqada iyo hoos u dhigto heerarka buufiska. Kiis telefoon oo leh ukun jilicsan ayaa aad u fiican! Waxaad u baahan doontaa qalbi qaboojiye kulul, cirifka cirifka cad, bakeeriga iyo qayb yar oo dharka ah. Marka hore, qaado kiiskaaga balaastigga ah oo samee goobo, ha qallajiyo oo daboolo cirifka caarada cad. Ka dib markaa, qaado bubbada, jarjar qeyb ka mid ah oo geli dharka. Ka dib markaa, ku dheji kubbadda xarunta dhexe ee wareegga. Ready! Xaaladda telefoonka ee xashiishka waa qabow! Ku ciyaarista taleefankani waa hab daaweyn iyo daaweyn. Intaa waxaa dheer, waa raqiis waana inaad hubisaa qalabka oo dhan guriga. Ku billow adigoo jarjaraya xajmiga taleefankaaga. Ka dib markaa, qaado jilbaha iyo shidaal si aad u xirtid caws. Dhuxusha dhoobo hal dhinac markaad aragto fiidiyowgeena. Ka dib markaa, ku qas biyo biyaha leh cunnooyinka cuntada oo isticmaal cayayaanka. Ha ilaawin inaad meel bannaan kaga tagto caws. Marka cirbadaha diyaar u ah inay midkood ku dhejiyaan mid ka mid ah qolofka taleefanka. Waxaad u baahan doontaa qalabka 8-10 ee telefoonka celceliska.
Baro sida loo sameeyo kiisaska taleefanka ee xiisaha leh. Tusaale ahaan, kiis telefoon oo leh noodle! Miyuu waalan yahay? Waxaad u baahan doontaa dhoobada polymer iyo sirinjiye. La soco barashada fudud! La soco fikrad kale oo xiiso leh oo loogu talagalay gabdhaha jecel midabka casaanka. Waxaad jeclaan laheyd fikrad aad u qurux badan!
Ha iloobin inaad hubiso sida loo abuuro kiis diirran si aad u soo dhaweyso asxaabtaada! Naqshaddan yar yar waxay noqon doontaa mid u fiican dhammaystirka kumbuyuutarka telefoonka!
00: 09 Fikradda Fikradda ee loogu talagalay Telefoonkaaga
03h50 Guryaha saafiga ah
09: 52 Case Case for Starbucks
10: 07 Kiis telefoon oo leh noodles
11: 57 Dhacdad Teleefan Soodhaweyn ah
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=asZ_-91qE_s
500 KU SOO DHAWAADA SNAKE! - VIDEO
Moustik karismatik hacking TV - halkan video ah